​बजारमा आयो साहित्यिक ‘पर्फ्युम’
१२ चैत्र २०७३
काठमाडौं, १२ चैत । समकालीन २४ कथाकारका प्रेमकथाको सङ्ग्रह ‘पर्फ्युम’ शनिबार सार्वजनिक भएको छ । लेखक नारायण ढकाल, प्रगति राई, सङ्गीत स्रोताका साथै पुस्तकका सम्पादकद्वय राजकुमार बानियाँ र दीपक सापकोटाले संयुक्त रुपमा सो पुस्तकको विमोचन गरेका हुन् । सो सङ्ग्रह इन्डिगो इन्क प्रकाशनले बजारमा ल्याएको हो । आख्यानकार ढकालले पूर्वीय र पाश्चात्य सभ्यतामा प्रेमको परिभाषालाई पनि अलग तरिकाले हेर्ने गरिएको र प्रेमलाई समाजसरह साहित्यले समेत… विस्तृत समाचार
तसलिमा नसरिनसँग वार्ता काठमाडौं, ८ चैत । बंगलादेशी लेखक तसलिमा नसरिनको नाम नेपाली पाठक र फयान–फलोवरका लागि नौलो होइन । महिला हकअधिकार र विशेषतस् इस्लाम धर्म्भित्रको ‘अतिवाद’ का विरूद्ध मुखर हुँदै आएकी नसरिन पेसाले चिकित्सक हुन् । सन् १९९४ पछि जन्मभूमि बंगलादेशबाट लखेटिएकी ५५ वर्षीया नसरिनले युरोपेली मुलुक स्विडेन, जर्मनी, फ्रान्स हुँदै अमेरिकामा पनि ‘आप्रवासी’ बनेर केही वर्ष बिताइन् । पछिल्ला वर्षमा भारतको दिल्लीमा बस्दै… विस्तृत समाचार
साहित्यकार दीक्षितको अभिनन्दन
काठमाडौं, ६ चैत । शंकर लामिछाने प्रतिष्ठानले अग्रज स्रष्टा मदनमणि दीक्षितलाई अभिनन्दन गरेको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सहकार्यमा प्रतिष्ठानले दीक्षितलाई शनिबार राजधानीमा अभिनन्दन गरेको हो । कार्यक्रममा साहित्यकार बालकृष्ण पोखरेललाई ५० हजार रुपैयाँ राशिको शंकर लामिछाने निबन्ध पुरस्कार र निबन्धकार दामोदर पुडासैनीलाई २५ हजार रुपैयाँ राशिको शंकर लामिछाने युवा निबन्ध पुरस्कार समर्पण गरिएको थियो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति विष्णुविभु घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा अभिनन्दित… विस्तृत समाचार
कुलपति भएपछि कविता
काठमाडौं, ६ चैत । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले १२औं कृतिका रूपमा कविता संग्रह ‘चक्रव्यूह’ प्रकाशन गरेका छन् । कविता विधाबाटै साहित्यिक यात्रा थालेका कुलपति उप्रेतीका यसअघि निबन्ध, नियात्रा, संस्मरण, समालोचना र भाषा–संस्कृतिसम्बन्धी ११ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् । तेह्रथुमको आठराईमा प्रारम्भिक अध्ययनकै बेला २०१६ सालतिर १२ वर्षको उमेरमै ‘बसन्त’ शीर्षकको कविता लेखेर काव्ययात्रा आरम्भ गरेका उनका कविता २० को दशकमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशनमा आएका… विस्तृत समाचार
​प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नारी–पुरुष सम्बन्धबारे विमर्श
२७ फाल्गुन २०७३
काठमाडौं, २७ फागुन । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा १०७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानको समालोचना तथा निबन्ध विभागद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, उपकुलपति डा। विष्णुविभु घिमिरेलगायतले आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । “नारी र पुरुषबीचको सहअस्तित्व र अन्तरसम्बन्ध प्रगाढ बने मात्रै जीवन सफल र सुमधुर हुन्छ”, कुलपति उप्रेतीले भने । ‘नारी र पुरुष अन्तरअस्तित्वसम्बन्धी अवधारणा र साहित्यमा त्यसको… विस्तृत समाचार
इलाम समाजको अधिवेशनमा तीन कृति लोकार्पित
काठमाडौं, २४ फागुन । इलाम समाज हङकङको संयोजनमा प्रकाशित तीन कृतिको हङकङमा लोकार्पण गरिएको छ । समाजद्वारा प्रकाशित स्मारिका÷मुखपत्र ‘इलाम’, लेखक तथा पत्रकार सचित राईद्वारा लिखित खोजमूलक कृति ‘माङखिम’ र स्व. डिल्लीराम बाङदेलद्वारा लिखित काव्य कृति ‘म फूल हुँ’को लोकार्पण गरिएको हो । संस्थाकी उपाध्यक्ष दीपा एवाई राईका अनुसार हङकङको जोडनस्थित ‘नयाँ पेज’को कार्यालयमा समाजको पाँचौं अधिवेशन तथा पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।… विस्तृत समाचार
​छिमेक र विश्वलाई चिनाउने अर्थशास्त्रीय कृति
श्याम रिमाल । –भारत र चीनलाई आपसी व्यापार बढाउनु जरुरी छ, ... क्षेत्रीय शक्तिको भूमिकाका लागि आआफ्नो स्वार्थ अनुरुप चल्ने बाध्यता पनि छ । –सीमावर्ती जनताको ध्यान( सडक बाँध बाँधेको विषयबाट) अन्तैतिर मोड्न भारतको खुफिया कर्मचारीतन्त्रले मधेस आन्दोलनको आयोजन गरेको हुनुसक्छ । –नेपालको अक्षम्यस्तरको भ्रष्ट, अकर्मण्य, पुरातन, असुन्दर कर्मचारीतन्त्रमाथि हर क्षेत्रमा भारतीय खुफियातन्त्र हाबी भएका कारण पनि चीनसँगको सम्बन्ध झन् जटिल र निकम्मा बनाइएको विश्वास… विस्तृत समाचार
​‘माङखिम’लाई रत्न बान्तवा वाङमय पुरस्कार
काठमाडौं, २३ फागुन । रत्न बान्तवा वाङ्मय पुरस्कार पहिलो पटक पत्रकार तथा लेखक सचित राईद्वारा लिखित निबन्धात्मक कृति ‘माङखिम’लाई प्रदान गरिने भएको छ । सहिद रत्नकुमार बान्तवाको नाममा खोज–अनुसन्धानकर्ता डा. देवी क्षेत्री दुलालले स्थापना गरेको यो पुरस्कार हालै ‘माङखिम’ कृतिलाई दिने निर्णय भएको हो । सहिद रत्न–बम प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहेका डा. दुलालले ५ हजार रुपैयाँसहित उक्त कृतिलाई हालै पुरस्कृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।… विस्तृत समाचार
यसरी सकियो पूर्वाञ्चल वाङ्मय गोष्ठी
विराटनगर, २३ फागुन । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको हीरक वर्षको अवसरमा ‘पूर्वाञ्चल वाङ्मय गोष्ठी’ विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । विराटनगरको हाटखोलास्थित आरोहण गुरुकुलमा भएको उक्त गोष्ठीमा समालोचना, संस्कृति, मातृभाषा र उपन्याससम्बन्धी कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । समालोचनासम्बन्धी रामजी तिमल्सिना, संस्कृतिसम्बन्धी डा. सोमप्रसाद खतिवडा, मातृभाषासम्बन्धी मुनाराज शेर्मा र उपन्याससम्बन्धी डा. गोपाल भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि क्रमशः डा. हरिहर भण्डारी, दधिराज सुवेदी, देवान किराती र… विस्तृत समाचार
छविरमण सिलवाल । आफू समयसँग होइन, समयलाई आफूसँग हिँडाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने देवप्रकाश त्रिपाठी राजनीतिका साथै कला साहित्यमा पनि रमाउने गर्दछन् । नेपाली साहित्यमा उनका दुई पुस्तक प्रकाशित छन् । पहिलो प्रलय प्रारम्भ र दोस्रो महानिशा । करिव अढाइ दशक देखि नेपाली पत्रकारितामा संलग्न रहेका त्रिपाठी घटना र विचार साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक पनि हुन् । बहुमुखी प्रतिभा भएका त्रिपाठी पत्रकारिता लगायत साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला र… विस्तृत समाचार
‹ First Newer 13 14 15 16 17 Older Last ›